I-Semalt - Indlela Yokukhomba Nokulwa Nomoya Ugaxekile Usebenzisa i-Google
Ugaxekile lwenzeka uma idatha engacelanga ifinyelelwe. Lolu hlobo logaxekile lusezigaba ezimbili. I-crawler spam ne-Ghost ogaxekile. Ukuqeda ithrafikhi ye-Ghost spam kuyinhlakanipho, kodwa udinga ukubona ukuthi yiluphi uhlobo lwe-malware olukhona, kuqala kakhulu - buy a fashion turban.
Abakwa-Crawlers bahlobo logaxekile empeleni bavakashela isayithi lakho ngokuthumela amabhuthi abangalalela ngokuphelele imithetho efana nalabo abakwi-robots.txt. Lapho bephuma kusayithi, umzila wokuvakashelwa ngokusemthethweni kwedatha ye-Google Analytics ushiye ngemuva, kodwa ngeshwa, kuyiphutha. Ziyinkimbinkimbi kakhulu ukubona ngoba zifihla emuva kokudluliselwa kumawebhusayithi angempela kanye ne-URL efanayo.
uFrank Abagnale, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , wabelane ngokuhlangenwe nakho kwakhe ngendlela yokulwa ne-Ghost spam ngempumelelo.
Ama-Ghosts yi-spam evamile kakhulu. Ngokungafani nabagibeli, abanakho ukuthintana nesayithi lakho, kunalokho, izibungu zibe yisiphakeli sakho se-Google se-analytics nge-Trojan pass through amakhodi wakho wokulandelela we-Google Analytics. Bakha amakhodi wakho ngokuwazuza kumuntu wesithathu noma amakhodi wokulandelela okwenzeka ngokungahleliwe (UA-XXXXXX-Y). Njengoba bengangeni ku-site yakho, basebenzisa uhlelo lokulinganisa ukushintsha idatha yakho ye-Google Analytics.
Iningi labantu livame ukubuza ukuthi kungani kufanele uchithe ugaxekile lweghost. Ugaxekile unemiphumela emibi kuma-analytics wabasebenzisi bamawebhusayithi. Bahlaziya isivinini se-intanethi yomsebenzisi ngokukhulisa umthwalo wesiphakeli. Nakuba zingaphazamisi ngokunembile nge-Search Engine Optimization, idatha ephathekayo ayibonakali ukuziphatha kwangempela kwe-intanethi yomsebenzisi. Ekugcineni, i-Search Engine Optimization yakho izosithinteka lapho izikhundla zakho zokusesha zizowa ngenxa yokwenza izinqumo ezingalungile kanye nezigwebo ezingacacile.
Naphezu kwalokhu, kulimaza amamethrikhi ebalulekile njengama-engagement, ama-sessions kanye namazinga okuguqulwa okudatshulwa kuwo emaphethelweni ahlukene, ngeke ahlasele i-Search Engine Research Page (SERP). Kulula nje, nakuba i-Google Analytics isevisi evamile yokuhlaziywa, akuzona zonke izindawo ezisebenzisa i-Google Analytics. Lokhu kuchaza ukuthi kungani idatha evela ku-Google analytics ngeke ithinte i-rankings kusuka kusayithi le-Google.
Kunezindlela zokubhekana nogaxekile we-ghost usebenzisa i-Google Analytics. Lezi zindlela zibandakanya izinyathelo ezisebenzisa isihlungi esisodwa ngokumelene nogaxekile we-ghost..Kunconywa kakhulu ngoba umsebenzisi uvuselela kuphela futhi uneza ikhodi entsha yokulandela. Uma kungenjalo, ukugcinwa okuncane okuvela kumsebenzisi kuyadingeka. Okokugcina, ukuhlonza izinsizakalo ezithandwayo ze-hostnames ekugcineni i-spam spam kusuka ekungeneni kwedatha ye-Google Analytics.
Okokuqala , iya ku-Google Analytics (lapho ubheka khona website ye-traffic ) bese ubona ithebhu yokubika. Kwiphaneli lesandla sobunxele, thola 'Abalaleli' futhi uchofoze kuso. Pheqa ngephaneli lesandla sobunxele bese uthola 'Ubuchwepheshe' futhi uchofoze kuso. Nweba ubuchwepheshe bese ukhetha 'Inethiwekhi'. Umbiko weNethiwekhi uzovela futhi phezulu, chofoza ku-'Igama le-Hostname '. Ngemuva kwalokhu, uhlu lwamagama we-hostnam luzovela kuhlanganise nalawo asetshenziswe ngogaxekile. Ungabhala uhlu lwamagama okubamba avumelekile. Isibonelo, i-yourmaindomain.com noma i-seosydney.com.
Okwesibili , faka wonke ama-hostname bese udala inkulumo ejwayelekile. Isibonelo, i-seosydney \_ .com | yourmaindomain.com.
Okwesithathu , yakha isihlungi esingokwezifiso. Chofoza kuthebhu 'Admin' ngakwesobunxele kwesandla ngakwesokunxele (qiniseka ukuthi unombono ngaphandle kokuhlunga). Chofoza ku- 'Zonke Izihlungi' bese ucindezela inkinobho ethi 'Engeza Hlunga.' Ngaphansi kokuthi 'Uhlobo lokuhlunga' chofoza 'Custom'. Lokhu kudala isihlungi esisha ngokwezifiso. Dala igama lokuhlunga. Khetha ukufaka 'I-Hostname' ngemva kokuhlola 'Faka phakathi' ibhulogi. Kopisha inkulumo yakho evamile ebhokisini le- 'Hlunga'.
Ekugcineni , iya ku-Apply Filters bese ukhetha 'Nkosi' bese "Engeza" ekubukeni okukhethiwe. Khetha 'Gcina' futhi usebenzise imiphumela yakho.
Nokho, kunconywa ukuthi njalo uma ufaka ikhodi yokulandelela kunoma yimuphi umsebenzi, kungcono ukufaka le khodi ekupheleni kwesihlungi. Lokhu kusiza ekuqedeni noma yikuphi okwenzeka esikhathini esizayo se-spam spam.